Mandalay ကားပြပွဲကြီးတွင် ပါဝင်ပြသ မည့် Max Auto Cars | CarsDB
Mandalay ကားပြပွဲကြီးတွင် ပါဝင်ပြသ မည့် Max...
Mandalay ကားပြပွဲကြီးတွင် ပါဝင်ပြသ မည့် Max Auto Cars
ကျင်းပမည့်နေ့ရက် - ၁-ဇူလိုင်-၂၀၁၄ မှ ၄-ဇူလိုင်-၂၀၁၄
ကျင်းပမည့်အချိန် -နံနက် ၀၉:၀၀ မှ ညနေ ၀၅:၀၀ ထိ
မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပသော ကားပြပွဲင်္ကြးတွင် Max Car Auto သည်ပါဝင် ပြသမည် ဖြစ်သည့်အပြင် Korea ကားများကိုလည်း ချိုသာသော ဈေးနှုန်းများဖြင့် လက်လီ၊လက္ကား ရောင်းချပေးမရ် ဖြစ်ပါသည်။
Max Car Auto သည် Korea နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော အရည်အသွေးမြင့်မားကောင်းမွန်သော ကားများကိုသာ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းပြီး စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဂီယာဘောက်စ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တို့အားအာမခံဖြင့် လက်လီ၊လက္ကား ရောင်းချပေးနေပါသည် ။လည်းကောင်းအပြင် အပိုပစ္စည်းများကိုလည်း တိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားပြီး Korea & Myanmar နိုင်ငံတို့မှ ကျွမ်းကျင်သော အင်ဂျင်နိယာများ ကိုယ်တိုင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
Max Car Auto မှ ကိုရီးယာနိုင်ငံထုတ် အရည်အသွေးမြင့် ကားများဖြစ်သော -
v Porter (II) -1 ton Truck
v Porter (II) -Double Cap
v Porter (II) -Wing Body
v Porter (II) -Ice Box
v Libero :1 ton Truck
v Starex GRX :12 Seats
v Hyundai Grace :15 Seats
v County Mini Bus :25 Seats
v Pregio -15 Seats
v Bango Coach -15 Seats
v Bongo (III) -1 ton
v Bongo (III) -1.2 ton
v Bongo (III) -1.4 ton
Yangon Office –No.(6/7), A1 Street Mingalardon Industrial Zone, Near Aung Mingalar Highway Bus Complex Mingalardon Township,Yangon
Mandalay Office –No. (24/25-B), 78th Street, Khin Saw Mu Curve, Chan Myae Thar Si (N) Quarter, Mahar Aung Myay Township, Mandalay
Contact Ph - 0943173451
ကငျြးပမညျ့နရေ့ကျ - ၁-ဇူလိုငျ-၂ဝ၁၄ မှ ၄-ဇူလိုငျ-၂ဝ၁၄
ကငျြးပမညျ့အခြိနျ -နံနကျ ဝ၉:ဝဝ မှ ညနေ ဝ၅:ဝဝ ထိ
မန်တလေးမွို့တှငျ ကငျြးပသော ကားပွပှဲင်ျကွးတှငျ Max Car Auto သညျပါဝငျ ပွသမညျ ဖွဈသညျ့အပွငျ Korea ကားမြားကိုလညျး ခြိုသာသော စြေးနှုနျးမြားဖွငျ့ လကျလီ၊လက်ကား ရောငျးခပြေးမရျ ဖွဈပါသညျ။
Max Car Auto သညျ Korea နိုငျငံမှ တငျသှငျးသော အရညျအသှေးမွငျ့မားကောငျးမှနျသော ကားမြားကိုသာ တိုကျရိုကျတငျသှငျးပွီး စကျပျိုငျးဆိုငျရာနှငျ့ ဂီယာဘောကျဈပိုငျးဆိုငျရာ တို့အားအာမခံဖွငျ့ လကျလီ၊လက်ကား ရောငျးခပြေးနပေါသညျ ။လညျးကောငျးအပွငျ အပိုပစ်စညျးမြားကိုလညျး တိုကျရိုကျတငျသှငျးထားပွီး Korea & Myanmar နိုငျငံတို့မှ ကြှမျးကငျြသော အငျဂငျြနိယာမြား ကိုယျတိုငျ ဝနျဆောငျမှုပေးလကျြရှိပါသညျ။
Max Car Auto မှ ကိုရီးယာနိုငျငံထုတျ အရညျအသှေးမွငျ့ ကားမြားဖွဈသော -
Posted at: 29-07-2014 12:57 PM